World Executive Aqaba Hotels - cheap hotels deals in Aqaba, Jordan - book rooms at best hotels in Aqaba, Jordan - discounts and deals with top hotel brands
Aqaba, Jordan Hotels and City Guide
Aqaba Hotels and Aqaba Guide with Aqaba maps, top attractions, room reservations and hotel deals at a wide range of the best Aqaba hotels
Book a room at one of the best hotels in Aqaba, Jordan. World Executive features some of the best hotels in Aqaba, catering for both the business and leisure traveller, and for all budgets.
Whether you want a luxury 4 or 5 star hotel, a cheap hotel in the heart of the city, or a Aqaba airport hotel for your stopover, World Executive offers you great deals on over 30,000 hotels worldwide with top hotel brands.To book a rental car to get around Aqaba, book a flight or arrange Aqaba airport parking, visit the other sections of the World Executive site.
Po Box 2311, Aqaba, Jordan
Hotel DescriptionInterContinental Aqaba offering 255 luxurious bedrooms and suites is situated on a private beach on the shores of the Red Sea. The hotel is 15 minutes away from King Hussain International Airport and 10 minutes walk from down town Aqaba....
The hotel is situated in the city centre of Aqaba, surrounded by the best restaurants and Diving-centres in town within 5 minutes walking distance from the beach. The main street in front of the hotel is called Walker Street where all tourists and locals take a stroll...
King Hussein Street,Aqaba,77110,Jordan
Adjacent to the archaeological site of the ancient Islamic city Ayla known as Aqaba. This 5-star city resort - located on the shores of the Red Sea Gulf - consists of 235 rooms and suites / 9 Food and Beverage outlets / pools / fitness area / private Red Sea Beach / Sauna...